အင်တာနက်ပေါ်မှာ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး လုံလုံခြုံခြုံ ဘယ်လိုဆက်သွယ်ကြမလဲ? • TECH CORNER
အင်တာနက်ပေါ်မှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်‌ယောက် လုံလုံခြုံခြုံ ဆက်သွယ်ဖို့၊ ကိုယ်ပြောလိုက်တာတွေကို အခြား ဘယ်သူကမှ ကြားထဲကနေ မရယူနိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ဆက်သွယ်နည်းတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
တစ်‌ယောက်နဲ့ တစ်‌ယောက် ရိုးရိုး ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး ပြောတာတွေ၊ ဖုန်းရဲ့ Message ကနေ သာမန် sms ပို့တာမျိုးတွေဆိုတာ ကိုယ်ကသာ အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ပြောဆိုမယ်ဆိုရင် (လက်ရှိ ကာလမှာ) လုံးဝ စိတ်မချရပါ။
သာမန်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေနဲ့ စာတို sms တွေဟာ SIM Card Providers တွေရဲ့ လက်ထဲမှာ ရှိပါတယ်။
ဆိုတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လုံလုံခြုံခြုံ ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့အတွက် End to End Encryption နည်းပညာပါဝင်တဲ့ စာပို့ Applications တွေကို အသုံးပြုရပါမယ်။
End to End Encryption ဆိုတာ ပို့သူနဲ့ လက်ခံသူ နှစ်ဦးတည်းကပဲ မြင်နိုင်၊ သိနိုင်တဲ့ စနစ်ပါ။ ဖုန်းကုမ္ပဏီ Telecom Providers တွေအပြင် App ကုမ္ပဏီ၊ အင်တာနက်ကုမ္ပဏီ Internet Provider တွေကလည်း ဝင်ကြည့်လို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် End to End Encryption စနစ်သုံး Application တွေကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ပေးပို့သူနဲ့ လက်ခံသူသာ သိသင့်တဲ့ကိစ္စတွေကို အစိုးရနဲ့ တခြား ကြားခံအဖွဲ့အစည်းတွေက အသုံးပြုလို့ မရတော့သလို အာဏာသုံးပြီး ရှာဖွေဖို့လည်း မလွယ်တော့ပါဘူး။
Facebook နဲ့ Messenger ဟာ တစ်တွဲတည်းဖြစ်လို့ Facebook account ဟက်ခံရရင် Messenger ပါ ပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Messenger မှာ ကိုယ့်ရဲ့ အသံ၊ ရိုက်လိုက်တဲ့စာ၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှူ၊ စကားပြောတာ စတဲ့အရာတွေကို Facebook company က သိမ်းဆည်းထားပြီး Facebook ပေါ်မှာ ကြော်ငြာတွေအတွက် ပြန်အသုံးချပါတယ်။
ကိုယ့်သူငယ်ချင်းနဲ့ အစားအသောက်အကြောင်းပြောဖြစ်ရင် Facebook မှာ စားသောက်ဆိုင် ကြော်ငြာတက်လာတာမျိုးတွေ အားလုံး ကြုံဖူးပါလိမ့်မယ်။
ဆိုတော့ Messenger အရမ်းသုံးချင်ရင် အလာပ၊ သလာပ နေကောင်းလား မေးတာလောက်က လွဲပြီး ကျန်တာ မပြောတာ အကောင်းဆုံးပါ။
(ဒါပေမယ့် Facebook က Messenger မှာ End to End Encryption နည်းပညာသုံး Secret Conversation ဆိုတဲ့ Feature ကို ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရေးကြီးကိစ္စတွေကို Messenger ကနေ ပြောရမှ ဖြစ်မယ်ဆိုရင် Secret Conversation ကနေ ပြောစေချင်ပါတယ်။)
Viber လဲ မသုံးသင့်ပါ
ပြည်တွင်းမှာ နောက်ထပ်အသုံးအများဆုံး Viber မှာ End to End Encryption နည်းပညာပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Viber မှာ ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကို အခြားတစ်ယောက်က သိရုံနဲ့ စာပို့တာ၊ ဖုန်းလျှောက်ခေါ်လို့ရတာ စတဲ့ အားနည်းချက်တွေရှိပါတယ်။
ပြီးတော့ Viber မှာ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စကားပြောပြီဆိုရင် ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကို Telegram တို့၊ Signal တို့လို Hide ထားလို့ မရပါ။
ဆိုတော့ လုံခြုံရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ပြောမယ်ဆိုရင် Viber ကိုလဲ မသုံးပဲ ရှောင်တာ‌ ကောင်းပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ဘာ Apps တွေ သုံးရမလဲ?
လုံခြုံရေးနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ပြောမယ်ဆိုရင် Wire, Wickr, Telegram, Signal စတဲ့ နာမည်ကြီး End to End Encryption နည်းပညာသုံး စာပို့ Applications တွေ ရှိပါတယ်။
အခုပြည်တွင်းမှာ လူတွေ စတင်အသုံးပြုလာနေပြီဖြစ်တဲ့ Telegram ဟာ Messenger, Viber တို့ထက် အများကြီး ပိုလုံခြုံပါတယ်။
Telegram Download လုပ်ရန် နှိပ်ပါ။
Public Channels တွေ၊ Public Groups တွေ နဲ့ ဝေဝေဆာဆာ သုံးလို့ကောင်းသလို လုံခြုံရေးအတွက်လဲ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကောင်းကောင်း ဆက်သွယ်လို့ ရပါတယ်။ Telegram က Stickers တွေဆို Messenger ထက်တောင် ပိုလှပါတယ်။
Telegram ရဲ့ Secret Chat ကနေ စကားပြောမယ်ဆိုရင်
End to End Encryption ကို သုံးထားလို့ စိတ်ချရတယ်။
ပြောခဲ့တာတွေဟာ Telegram Servers မှာ ‌ကျန်မနေခဲ့ဘူး။
ပြောထားတာတွေကို အလိုအလျောက် ဖျစ်ပစ်တဲ့ Timer သတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်။
အခြားတစ်ယောက်ယောက်ကို Forward လုပ်လို့မရပါဘူး။ Screenshot, Screen Record တွေလဲ လုပ်လို့မရပါဘူး။
ဆိုတော့ ဒီကာလမှာ Telegram ဟာ ရှိကိုရှိရမယ့် အင်တာနက်စကားပြော Application ဖြစ်ပါတယ်။
Android ရဲ့ Play Store မှာရော iOS ရဲ့ App Store မှာပါ Telegram လို့ အလွယ်တကူ ရှာဖွေပြီး Download ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် Telegram ထက် ပိုပြီး ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ လုံခြုံရေးအရ နာမည်ကြီးတဲ့ App တစ်ခုက Signal ပါ။ ပြည်တွင်းမှာလဲ လူတွေစတင်အသုံးများလာနေပါပြီ။
Signal ရဲ့ User Interface ဟာ အရမ်းရိုးရိုးရှင်းရှင်း နဲ့ Minimalist ကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင် Signal ရဲ့ UI ကို သဘောကျပါလိမ့်မယ်။ သုံးရတာလဲ အရမ်းသွက်သွက်လက်လက် ရှိပါတယ်။ Signal ဟာ လုံခြုံရေးအဓိက အသားပေးဖြစ်တာကြောင့် Messenger တို့ Telegram တို့လောက် မျက်စိပဒသာ ဖြစ်စရာတွေတော့ မပါဝင်ပါဘူး။
Signal download လုပ်ရန် နှိပ်ပါ
Signal ရော၊ Telegram မှာ ရော Secret Chat လို့ ခေါ်တဲ့ လျှို့ဝှက်စကားပြောခန်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
Signal မှာဆိုရင် အချင်းချင်းပြောနေတဲ့ စကားတွေကို အချိန်တစ်ခုအတွင်း အလိုအလျောက်ပျောက်ကွယ်သွားအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ Disappearing Messages ဆိုတဲ့ Function ပါဝင်ပါသေးတယ်။
ဆိုတော့ အနှစ်ချုပ်ရရင် ကိုယ်က အရေးကြီးစကားတွေကို အသိမိတ်ဆွေတွေနဲ့ ပြောတတ်သူဆိုရင် Messenger နဲ့ Viber ကို မသုံးသင့်ပဲ လုံခြုံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စမှန်သမျှ ပြောမယ်ဆိုရင် Telegram နဲ့ Signal တစ်ခုခုကိုသာ သုံးကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Post Views: 1,238 Facebook0Tweet0Email0Share0Shares0 ကျနော်တို့ Page ကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရပ်နားသွားတဲ့ Computer Parts တွေအကြောင်းကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ ဒီတစ်ခေါက်ဖော်ပြပေးမှာကတော့ PC Parts